Edere site Tranquillus | Jul 4, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Atụmatụ mmepe mmepe
Otu ụlọ ọrụ chọrọ ịzụlite ndị ọrụ ya wee si otú a na-eto eto. Nwere ike ịdabere na atụmatụ mmepe mmepe. Ndị a bụ ọtụtụ ọzụzụ ọzụzụ ga-enwerịrị nnwapụta nke ndị were ha n'ọrụ maka ndị ọrụ ha. Gbado anya na usoro 4 a.
Gịnị bụ atụmatụ atụmatụ mmepe?
Kemgbe Jenụwarị 1, 2019, atụmatụ ọzụzụ na-aghọ atụmatụ mmepe mmepe. O na - achikota ihe omumu nile nke onye were ya n’ọrụ maka ndi oru ya. N'ihi na ọzụzụ ahụ na-emezu ebumnuche ọkachamara, ngalaba ọ bụla ga-elele ọzụzụ ọzụzụ nke ndị ọrụ ya.
Na ngwụcha ọzụzụ ahụ, ndị ọrụ ahụ enwetala ọhụụ na ihe ọmụma. Ha ga - enwe ike imelite ma ọ bụ wusie ihe ọmụma na ahụmịhe ha ike iji nọgide na-enwe ọnọdụ ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu.
Enwere ike ịme mmepe mmepe site na nkuzi nke onwe ma ọ bụ nke otu. A na-ezube nzukọ ndị ọkachamara na mmemme na ọrụ ma ọ bụ nnọkọ dịka akụkụ nke atụmatụ mmepe mmepe.
Planzụlite atụmatụ mmepe nwere ikike abụghị ọrụ maka onye were ya n'ọrụ, mana ọ na-atụ aro nke ukwuu. Ihe a na - enyere mmadụ aka na - enyere aka ịzụlite ndị ọrụ. N’ezie, onye ọrụ etinyegoro n’atụmatụ ịzụlite nka ga-arụpụta ihe ma bụrụkwa onye mkpali.
Ole ndi bu ndi atumatu a nwere atumatu mmepe?
Ndi mmadu abuo na-eche banyere atumatu aka ha:
Onye were ya n’ọrụ
O nwere ike ichebara ụlọ ọrụ niile echiche ma ha bụ VSE, SME ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Mmejuputa na mmejuputa atumatu mmepe mmepe nka bu ihe onye n’aru n’uche. Nke ikpeazụ ahụ nwere ike ọ gaghị eji ya ma ọ bụrụ na ọ hụghị mkpa ahụ.
Ndị ọrụ mmekọrịta
Ndị ọrụ niile, ma ọ bụ ndị njikwa, ndị isi ma ọ bụ ndị ọrụ, nwere ike ịbụ akụkụ nke atụmatụ mmepe mmepe. Ọ bụ akụkụ nke nkwekọrịta ọrụ nkịtị. Ozugbo a gwara onye ọrụ nzụlite ọzụzụ mmepe, nke ikpeazụ a ga-esoro. Mara na ọbụlagodi ndị ọrụ nwere oge ọrụ, ma ọ bụ n'oge nnwale nwere ike itinye ya na atụmatụ mmepe. Mana ọ dabere na ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Ajụjụ nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịtụle dịka nnabata na-ebute nsonaazụ ọkachamara. Agaghị ama onye ọrụ n’enwe ọzụzụ n'oge ọzụzụ n'ihi na ọ nọla ezumike ma ọ bụ ezumike. N'ezie ọ dịghị nsonaazụ.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na etinyeghị onye ọrụ na atụmatụ mmepe mmepe, ha nwere ike ịrịọ ka esonye na N'ajụjụ ọnụ ha na N + 1 (ọkwa). Nke ikpeazu ga-eme ka ihe nile dị ya n’ajụjụ ọnụ gbaa ajụjụ ọnụ.
Onye ọrụ ahụ ga-edebe ikike ya niile n'oge ọzụzụ ahụ. Nkwụghachi ụgwọ ya na ụgwọ ọrụ ya agbanwebeghị. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla mere n'oge ọzụzụ, a ga-ele nke a anya dịka ọghọm ọrụ.
Onye ọrụ ahụ anọghị n'oge ọzụzụ ahụ nwere ike irite uru na nnọkọ ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ezighi ezi na ọnụnọ ya ziri ezi. Dịka izu ike ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ mkpa metụtara ezinụlọ. Hapụ, ọbụlagodi na ahaziri nke ọma na ezumike ahụ abụghị akụkụ nke ezighi ezi maka ọzụzụ mmepe na-efu efu.
Etu esi eweputa atumatu mmepe ihe nka?
Mmepe nke atụmatụ mmepe ikike a na-eme ka enye ọzụzụ ọzụzụ. Mmejuputa ya na-amalite site na ịchọputa mkpa ọzụzụ.
Ọmụmaatụ: ị ​​bụ onye nkwukọrịta nkwukọrịta, ọrụ gị bụ ijikwa nkwukọrịta nke ime na nke mpụga. Kwesiri ọzụzụ na nkwukọrịta dijitalụ iji bulie aha ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na isiokwu a bụ ihe ọhụrụ nye gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ isi iji mụtakwuo banyere. Ga-achọ ọzụzụ na nkwukọrịta dijitalụ.
N + 1 gị na-etinye arịrịọ maka ndị isi n'ụdị akwụkwọ. Ọ aghaghi ịgụnye ọnụ ahịa agbakwunyere, mmetụta ya, na oge ọzụzụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe emechara usoro ikike ahụ, arịrịọ a ga-aga na ọrụ mmadụ, nke ga-achọ ndị ọrụ kwesịrị ekwesị iji mezuo ọzụzụ ahụ. Ọzụzụ nwere ike ime n’ime ma ọ bụ n’èzí ụlọ ọrụ. Onye were ya n'ọrụ ga-akwụ ụgwọ ya.
Na ngwụsị nke ọzụzụ ahụ, a ga-enyefe gị nyocha nyocha nke ihe ndị rụzuru. Nke a ga - ekpebi ogo ị mụtara n'ọhịa. Na mgbakwunye, a ga-arụkwa nyocha iji nyochaa nsonaazụ gị. A na-eme ihe a n'oge oge nyocha dị na kalenda ụlọ ọrụ gị. N'ozuzu, usoro a haziri ahazi na-eme nyocha ọhụụ na nkeji ọ bụla ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ.
Atụmatụ mmepe mmepe ga-eduga nsonaazụ a na-ahụ anya maka ụlọ ọrụ ahụ. Na mgbakwunye na ịmara onye ọrụ ahụ, ihe owuwu ahụ, tinyere ihe ndị ọzọ, emeela ka amata ya na netwọkụ mmekọrịta.
Kedu otu esi amata na atụmatụ mmepe mmepe enwewo ihe ịga nke ọma?
Ọtụtụ ndị isi anaghị achọpụta arụmọrụ nke atụmatụ mmepe mmepe. Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kpatara ya. Structuresfọdụ ụlọ anaghị ahụ na ọ dị mkpa izipu ndị ọrụ ha ọzụzụ. Ha chere na site n’ịmụta ọrụ, ha ga-azụlite aka ha.
Agbanyeghị, enwere ike tụta ọtụtụ ihe ngosipụta arụmọrụ site na ntinye nke usoro ọzụzụ. Ọ bụrụ na anyị ewere ọmụmaatụ nke onye isi nkwukọrịta bụ onye mecharala ọzụzụ na Community Management dịka ọmụmaatụ. Onye sonyere ya enwetala ọtụtụ nkà, dị ka omume nke azụmaahịa inbound, ọmụmụ nyocha na ikike nke ngwaọrụ dijitalụ. N’etiti ihe ndi ozo, inwere ike ihita ihe kpaliri gi na inwe obi gi.
Ihe kacha mma ime iji nweta ezigbo nsonaazụ. Ọ bụ ụdị ịkọwapụta ike gị tupu oge eruo. Na na, ihe ọ bụla n'ọhịa. Ọ bụrụ na, n’ime ọnwa isii sochirinụ, ị zụọ naanị onwe gị. Na okike nke udidi nile di na Excel. Nke ahụ bụ ozugbo enwere ohere nyere gị ndị ọrụ ibe gị. Ma ọ bụ onye isi gị, nnukwu eserese ọchụchọ. O doro anya na mgbe ị rịọrọ maka ọzụzụ na Excel. Ọ dịghị onye ga-enwe obi abụọ ma uru ọzụzụ a bara. Emegosiputara ikike gi. Ọ ga-abụ naanị usoro iwu dị mfe. Ohere inweta ka ị nwekwuo nka.
Atụmatụ mmepe dị ka aka ga-esi dị. Julaị 2nd, 2020Tranquillus
gara agaOru Ọrụ Mgbanwe Ọkachamara: Mail Mail
-esonụMmelite na Ntughachi ma ọ bụ nkwalite ọrụ ịmụ ihe (Pro-A).